ဝိမုတ္တိသုခ (The Bliss Of Emancipation): April 2009
မန္တလေးတိုင်း၊ တံတားဦးမြို့ နယ်
နေ့ စဉ်ဟောပြ သြ၀ါဒ
ခန္ဓာဥာဏ်စိုက်ပြီးတော့ ( ယောနိသောမနသိကာရ ) မှန်မှန်ကန်ကန် နှလုံးသွင်းပြီး အမှတ်ဆက်စပ် အောင် မှတ်နှိင်တဲ့၊ မှတ်တတ်တဲ့၊ မှတ်နေတဲ့၊ မှတ်သွားမယ့် ယောဂီသူတော်စင်တွေဟာ၊ ငြိမ်းအေးတဲ့
တရားကို ဧကန်မုချ တွေ့ ရလိမ့်မယ်။
အခုလို ဗုဒ္ဓမြတ်စွာသာသနာတော်ကြီးနဲ့ကြုံတဲ့အချိန်၊ ကံကောင်းထောက်မလို့လူ့ဘ၀ရောက်လာတဲ့ အချိန်မှာ သံဝေဂဥာဏ်တွေယှဉ်ပြီးတော့ ကြိုးစားကြမယ်ဆိုရင် အချိန်မနှောင်းသေးပါဘူး။
ခန္ဓာဥာဏ်စိုက်ပြီးတော့ ဣရိယာပုထ်မရွေး၊ အချိန်မရွေး၊ နေရာမရွေးဘဲ ရုပ်နာမ်ဓမ္မသင်္ခါရ သဘော တရားတွေရဲ့ အဖြစ်အပျက်ကို ရှေ့နောက်နှစ်ရပ် အမှတ်ဆက်အောင်၊ ဂျက်မိအောင် မှတ်တတ်ဘို့အထူးလိုအပ် တယ်။ တကယ်တော့ ခန္ဓာဟာ ကမ္မဋ္ဌာန်းကျောင်းကြီးပါပဲ။
Labels: Thu Nge Taw Sayardaw
When somebody says, "I love you", we feel very happy, but we don't really believe it. We always have this fear in our minds, "When he/she knows more about me he/she will not love me any more. I have to be prepared for that. I have to be prepared for being rejected." We don't have complete trust; we are always uncertain. Are we really sure when we say, "I love you"? Very rarely. It seems rare to know somebody who can really understand you. When you have nobody who understands you (or at least tries to understand or empathise with you), you feel very lonely. How many lonely people are there in this world of five billion people? Is there real contact between one person and another? Can we really touch another human being? Will you let another person touch you?
You want someone to love you. Yet when you love someone you don't feel that you're worthy of their love. To make you feel worthy of his love you must sacrifice yourself, but that kind of relationship is never secure and satisfying. Security in relationships: it's possible only for those who are mature and secure in themselves. Those who have feelings of insecurity and unworthiness will never feel secure in any relationship.
People usually don't love someone who has sacrificed for them; they don't want to be indebted to anybody. And even more so if you remind them of how much you have sacrificed for them. Strange? Yes, people are strange. If you have helped someone it's best for you if you then forget about it. If they remember, it's nice of them, but if you remind them of how much you have done for them, they'll hate you for it.
"If I sacrifice for him he'll love me forever." No! Don't deceive yourself.
"I love you not for what you've done for me, but for who you are."
"I'll forgive him and he'll forgive me, and we'll love each other." No! That'sakind of bargaining.
Do you love yourself? Strange question. We don't think about it.
We must learn to love without becoming dependent or possessive. Pure love doesn't cause pain.
Real metta is necessary in relationships; without it relationships don't mean much. With metta comes acceptance, understanding and tolerance. We are not perfect and nobody is perfect. To see our own imperfection and to feel OK about it is very important to our happiness and even to the progress in our practice. If we cannot accept our imperfection how can we accept somebody else's?
(Quoted from the book, "Snow In The Summer" by Sayadaw U Jotika.)
Posted by The Bliss Of Emancipation at 10:03 AM0comments Links to this post
ဘုရားက ရောင်စုံမဟုတ်ပါဘူး ရွှေရောင်ပါ မိမိအိမ်က စံကျောင်းတော်ရောက်မှ ရောင်စုံ ဆလိုက်ထိုးလိုက်ပါ
လောလောဆယ် ၁၀-ဆူ ဒါနပြုပါမည်။
ပို့ရမည့် လိပ်စာကိုသာ mail ပို့ပေးလိုက်ပါ...
လိပ်စာနှင့်ပတ်သက်၍ နောက်တစ်ကြိမ် မဆက်သွယ်ပါ
ဒီကိစ္စနှင့်ပတ်သက်၍ မည်သည့်နေရာတွင်မှ စာတင်ရန် အစီအစဉ်မရှိ
ဘုရားအလှူရှင်နှင့် ဘုန်းကြီးတိုင်ပင်၍ တရုတ်ပြည်မှာ ပြုလုပ်ပါသည်။
ဘုန်းကြီးသို့ အဆူ ၅၀၀-လှူထားပါသည်။
အခမဲ့ လှူဒါန်းပြီး ဖြစ်ပါသည်။
နောက်ထပ်လိုအပ် ပင့်ဆောင်လိုက လာရောက်အလှူခံ နိုင်ပါသေးသည်။
ဤဆင်းတုတော် လှူနေသည်မှာ ၃-နှစ်ကျော်ပါပြီ။
ပြုလုပ်သည်မှာ ပုံတော် ၃-မျိုးဖြစ်ပါသည်
ပြောရလျှင် ဒီဘုန်းကြီး အတ္တကြီးသည် အပြောခံရပါဦးမည်။ မတတ်နိုင်ပါ။
အစပထမတော့ စာတိုက်ပို့ပေးမယ့်သူရဲ့ အခက်အခဲလေးကြောင့်
၁၀-ဆူသာ လှူပါဦးမယ်လို့ ဆိုခဲ့ပါတယ်။
ကျောင်းနဲ့နီးစပ်သော ဒကာဒကာမများမှ အလှူခံသူများထံသို့ ပို့ပေးပါ့မယ်ဆိုတဲ့အတွက် နောက်ထပ် အလှူခံနိုင်ပါသေးတယ်၊
တချို့ကလည်း ဘုန်းကြီးကိုအားနာလို့ အလှူမခံသေးဘူးလို့ သိရပါတယ်။ အားနာ စရာမဟုတ်ပါ အလှူခံနိုင်ပါတယ်။ အလှူခံသူရှိမှသာ လှူလိုသူမှာ ဒါနဖြစ်ပါတယ်။ အလှူခံသူရဲ့တန်ဖိုးဟာ ဒါနကောင်းမှုတစ်ခု ဖြစ်စေပါလားလို့ မြင်အောင်ကြည့် တတ်ကြရအောင်...။
တချို့ကလည်း ငါတို့နဲ့က ခင်တာမဟုတ်ဘူး ခုမှ သွားပြီးအလှူခံလို့ မကောင်းပါ ဘူး ရှက်စရာကြီး ဒီလိုလဲ ရှိကြပါဦးမယ်။ မဖြစ်ကြပါနဲ့ မည်သူ့ကိုဖြစ်ဖြစ် ဒါနတစ်ခု ဖြစ်ဖို့ အတွက်သာ ရည်ရွယ်တာပါ၊ အမည်မမှန်လဲရပါတယ်၊ အမည်နေရာမှာ တစ်ခုခုပါရင် ရပါတယ်၊ ဒါကခေါ်ဝေါ်ရုံမျှသာပါ။ လိုရင်းက ပို့ပေးရမယ့်လိပ်စာ လေး မှန်ဘို့ပါပဲ။ ဒါဆိုရပါပြီ။ အလှူခံနိုင်ကြပါတယ်...။
တချို့က ဘုန်းကြီးကို ဒီလိုလှူတာ သေဌေးနဲ့တူပါတယ် ဆိုတာလဲ ရှိကြလိမ့်ဦး မယ်။ ဘုန်းကြီးသေဌေး မဟုတ်ပါ...။ ဘုန်းကြီးအိတ်ထောင် နှစ်ဖက်လုံး ပိတ်ထား ပါတယ်၊ အ၀င်လည်း မရှိပါ အထွက်လည်းမရှိပါ ယခုအလှူဆို လက်ဆယ်ချောင်း နှင့် နှိပ်ရုံသာ။
အလှူခံရမှာ ရှက်စရာကြီး ဆိုတာရယ် အလှူခံရှိမှ ဒါနဖြစ်တယ်ဆိုတာရယ်...
ဘုန်းတော်ကြီးများ ရဟန်းခံ သာမဏေ၀တ်ပြီ ဆိုကထဲက ဆရာဘုန်းကြီးများက သင်ပေးလိုက်ပါတယ်၊ သင့်မှာရှိတဲ့ ကိုယ်ပိုင်သပိတ်နဲ့ သင် အလှူခံစားရမယ်လို့... မိမိနဲ့ ဆွေမတော် မျိုးမတော်သူတွေထံမှာ သပိတ်တစ်လုံးပိုက်လို့ အိပ်ပေါက်စေ့ လှူလိုမှန်းမသိ မလှူလိုမှန်းမသိနဲ့၊ မျက်နှာလေး အောက်ချ မိမိမှာ ရှိရှိသမျှ မာနတွေခွါပြီး အလှူခံစားနေရသူ ရဟန်းသံဃာတော်များရဲ့ဘ၀၊ ရှက်ရွံ့မှုတွေ ဘယ်လောက်ရှိကြမလဲ စဉ်းစားကြည့်ကြပါ ဒကာဒကာမတို့၊ သူတော်ကောင်းဓါတ် ကိန်းတော်မူကြတဲ့ ဘုန်းတော်ကြီးများဟာ ဒီအသိလောက်နဲ့တင်ကို သူတို့မှာ ရှိကြတဲ့ မာနတရားတွေ အလွှာလိုက် အလွှာလိုက် ကွာကျသွားစေပါတယ်။
အလှူခံပုဂ္ဂိုလ်တွေ အမျိုးအားဖြင့် ၁၄-မျိုးရှိပါတယ်... ၁၄-မျိုးထဲက တစ်မျိုးမျိုးနဲ့ တွေ့မှသာ ဒါနတစ်ခု ဖြစ်ကြရပါတယ်။ ဒါ့ကြောင့် ဒို့လို အလှူခံပုဂ္ဂိုလ်တွေ ရှိဘို့ အရေးကြီးပါလားလို့ သိပေးပါ...။ ဒါ့ကြောင့် သင် ယခု အလှူခံပါ...။
ဒီအလှူခံ ပုဂ္ဂိုလ်တွေထဲမှာ သီလ သမာဓိ ပညာ ပြည့်ဝသူများဟာ အကောင်းဆုံး အလှူခံတွေပေါ့...။ သီလ သမာဓိ ပညာ ပြည့်ဝသောသူများဟာလည်း၊ မြတ်ဗုဒ္ဓ သာသနာမှာပဲ ရှိပါတယ်။ ရှာနိုင်ကြပါစေ...။ လွယ်ကူစွာ တွေ့နိုင်ကြပါစေ...။
တကယ်လို့များ ဒကာဒကာမတို့ဘက်က အလှူခံပြီး...
ဘုန်းကြီးဘက်ကများ လှူဒါန်းမှု မပြုခဲ့သေးသော်...
ဒီလိုလေး သိပေးလိုက်ပါ ဒီဘုန်းကြီး အနားယူသွားပေါ့...
ဘုန်းကြီးတို့မှာ ရရှိထားတဲ့ ဒီခန္ဓာက မမြဲဘူး ဆင်းရဲတယ် အစိုးမရဘူးလို့...
ဟိုရေးဒီရေးနဲ့ စာရေးမကောင်းတော့ ပျင်းနေလိမ့်မယ်...
ရီစရာဖြစ်အောင် ကိုယ့်အကြောင်းတော့ ကြွားထားလိုက်ပါဦးမယ်...
အညာသား (ကျပ်မပြည့်) ဆိုတော့ အစက အသားက ဖြူညိုညိုပါ...
ခု အေးတဲ့ဒေသ ရောက်လာတော့ အသားလေးက ၀ါလာပြီလေ...
ဘုန်းကြီးဆိုတော့ ပိုလှလာပြီလို့တော့ မဆိုလိုပါဘူးနော်...
(ဘုန်းဘုန်း နှင့် ဘုန်းဘုန်းရဲ့ ဒကာ၊ ဒကာမများ၏ ဒါနပါရမီ ဖြည့်ဆီးမှုအပေါ် ကြည်ညိုလေးစားမိပါသောကြောင့် ဒီပို့ စ်ကို လက်ဆင့်ကမ်းဝေမျှခြင်းဖြစ်ပါသည်။ ဘုန်းဘုန်းထံ ဆက်သွယ်အလှူခံလိုပါလျင် lawkanartha@gmail.com သို့အီးမေးလ်ပို့ ၍ (သို့ ) www.lknt.org ဆိုက်ရှိ cbox တွင် စာရေးသားထားခဲ့ခြင်းဖြင့် ဆက်သွယ်အလှူခံနိုင်ကြပါတယ်ခင်ဗျား။ ၀ိမုတ္တိသုခ)
Posted by The Bliss Of Emancipation at 9:07 AM0comments Links to this post
The Nine Essential Factors Which Strengthen The Indriya OfaVipassana Yogi
Venerable Ashin Kundalabhivamsa
Nine Essential Factors for Vipassana
Publish at Scribd or explore others: Non-fiction Books dhamma
Posted by The Bliss Of Emancipation at 11:15 PM0comments Links to this post
Labels: Dhamma Ebooks, Saddhammaramsi Sayadaw
In all human activities, this meditation practice is the most important. (But note that when we say ‘without thinking about it’ we don’t mean absent minded.)
Let’s see why we don’t even use noting:
For example when we hear something and try to label: This isa‘dog bark.’ To come to this conclusion we needavery complicated process in the mind.
First you hear the sound and recall from the past similar sounds that you heard, you put the two together, then the mind works very fast likeacomputer.
Recognises: This is the same as that, and then you recall what it was called in the past, and you remember that, that wasadog barking in the past and you bring that past to the present: This sound isa‘dog barking’.
You go through four different processes, four steps, in order to get to that.
In this meditation you stop at the first step, no more.
Even to name something you go through many-many steps like when we hear one word, if the sound is one syllable you go four full steps, if it has two syllables we go though more than four, maybe six or eight sometimes and if the sound has three or four syllables we have to go through many-many steps to get to the conclusion. The mind works very fast very hard. In this meditation practice we stop all that process we stay with the first step. That simple.
But it’s not easy to do that because we haveahabit of going through the whole process.
But as I said before if you practise it, you don’t find it very difficult either.
It is just the act of being, when you see there is just ‘seeing’ when you hear there is just ‘hearing’ when you have any sensations in the body, there is just sensations, when you taste there is just ‘tasting’ when you smell there is just ‘smelling’, when you think there is just ‘thinking.’
Not even ‘I’ experiencing that. Because that ‘I’ can make things become very complicated. Of all human activity, body and mind, this is the simplest.
The act of just ‘being’ in all it’s simplicity and naturalness with nothing added at all.
That is the most important point: nothing added at all.
It’s just the experience of simple ‘being’, experience of simple process. So in practicing this meditation do not expect anything to happen.
That is also another important thing.
Especially for those of you who have been meditating for quiteawhile,along time and who have had good experiences before; whenever they meditate again they always want to get to that state as quickly as possible. They expect that.
‘I have been into that peaceful state before. Now I am going to sit and get there as quickly as possible’. The harder we try the harder it becomes. So don’t try, don’t expect. This is another paradox.
If you really don’t try anything at all you will find that you are there.
To be as simple as possible — nothing added — sit as comfortable as possible, without overlapping anything.
The most important thing is to be balanced and to be at ease. If you can sit full lotus it’s ok. I used to sit like that before but I don’t try it any more. It’s not necessary.
(From - Buddhist Meditation - Contemplation of the Mind)
Posted by The Bliss Of Emancipation at 7:36 AM0comments Links to this post
Posted by The Bliss Of Emancipation at 2:56 PM0comments Links to this post
(တစ်နေ့ က ရလိုက်တဲ့ ဓမ္မဒါန လက်ကမ်းစာစောင်လေးကို Scan ဖတ်ပြီး ပြန်လည်ဝေမျှလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျား။)
Posted by The Bliss Of Emancipation at 1:41 AM0comments Links to this post
A highly learned professor was traveling onaship at sea. An illiterate sailor was also on the same ship.
Mid-journey they hadadiscussion.
The professor asked, "Old man, have you studied geology, the science of the earth?".
The old man replied humbly, "Sir, I am illiterate so I cannot read. I have not studied geology."
The professor then announced, "Old man, then you have wasted one-quarter of your life." The old man became very sad at the thought that he had wasted one-quarter of his life.
The next day the professor asked him, "Old man, have you studied meteorology, the science of weather?"
The old man replied humbly, "Sir, I am illiterate so I cannot read. I have not studied meteorology."
The professor then announced, "Old man, then you have wasted one-half of your life." The old man became very sad at the thought that he had wasted one-half of his life.
The next day the professor asked him, "Old man, have you studied zoology, the science of animal life?"
The old man replied humbly, "Sir, I am illiterate so I cannot read. I have not studied zoology."
The professor then announced, "Old man, then you have wasted three-quarters of your life." The old man became very sad at the thought that he had wasted three-quarters of his life.
On the forth day, it was the sailor's turn to askaquestion. He came running to the professor crying, "Professor Sir, Professor Sir, have you studied swimmology, the science of swimming?"
The professor looked surprised and said, "No, I don't know how to swim."
The old man replied, "Oh Professor Sir, I am so sorry! You have wasted your whole life! This ship has struckarock and it is about to sink. Those who can swim can swim that nearby island. All others will die."
(အစ်မ မသန်းသန်းစိန် (သစ္စာအလင်း) တခါက C Box မှာ ဒီပုံပြင်လေးဖတ်ချင်ပါတယ် ပြောထားလို့ကျွန်တော်ရှာပြီး တင်ပေးလိုက်ပါတယ်။ အစ်မ စိတ်ကျေနပ် သဘောကျလိမ့်မယ်လို့ ထင်ပါတယ်ခင်ဗျား။)
Posted by The Bliss Of Emancipation at 10:26 PM 1 comments Links to this post
ဗုဒ္ဓနှင့် ဥပါလိသူကြွယ် (အနာဂတ်သာသနာမှ ကောက်နုတ်ချက်)
Buddha and Upali
Publish at Scribd or explore others: Religion & Spiritual spirituality spiritual
(ကျွန်တော် ဒီဝတ္ထုကြောင်းမှာပါတဲ့ မြတ်စွာဘုရားရှင်ရဲ့ ဥပါလိသူကြွယ်ကို နောက်ိဆုံးပိုင်းလေးမှာ ဆုံးမတဲ့ စကားတော်တွေကို ဖတ်မိတိုင်း အရှင်မြတ်ရဲ့ အယူဝါဒမတူသူတွေအပေါ်မှာထားတဲ့ ကြီးမြတ်တဲ့ သဘောထားကို ကြည်ညိုလို့ မဆုံးဖြစ်ရပါတယ် ခင်ဗျား။
ဒီဝတ္ထုကြောင်းကို အရေးအသား နောက်ပုံစံတစ်မျိုးဖြင့် http://kokhy-learns-abhiddhamma.blogspot.com/2009/02/blog-post_15.html တွင်လည်း ဖတ်ရှုနိုင်ပါသည်။ )
Posted by The Bliss Of Emancipation at 8:42 PM0comments Links to this post
Posted by The Bliss Of Emancipation at 10:14 AM0comments Links to this post
30 March, 2009 by Cittasamvaro
The Mp3 recording from Wednesday 25th March 09 when Venerbale Sayadaw U Jotika stopped off in Bangkok to givea(much too rare) public talk, hosted by his publisher DMG Books is posted below (English only segments)
Sayadaw isahugely respected master from Burma, whose Dhamma is lyrical, simple and precise. There are several books of his teachings, notably the superb Map of the Journey and the book Snow in the Summer which is available online. While online versions are free, the proceeds from the printed versions are forwarded and used to help the suffering people in Myanmar. This wasavery special opportunity to meet withatremendously inspiring teacher.
The event was in English with translation into Thai, but through the wonders of modern computing it wasarelatively painless process to cut the Thai parts and create an MP3 of just the English sections; posted below.
The talk was based on some verses from an old anonymous Samurai poem, which served asalaunching point into some beautiful dhamma. In fact, this topic will be the basis of Sayadaw’s upcoming book.
Venerable Sayadaw will see this post and all your comments, and is very interested to hear your own reactions to the stanzas - what they mean to you. He has asked that, if you listen to the talk, you pick out whichever of the stanzas has struck you in anyway, and explain why. You can also leave any other messages/comments.
The verses referred to (use google for the full poem):
I have no home; I make mindfulness my home.
I have no life or death; I make the tides of breathing my life and death.
I have no castle; I make the immovable mind my castle.
The file is for free distribution, but rather than offering for download elsewhere please use this page asalink so that comments can be forwarded to Sayadaw. Click image below :
Posted in All Posts, Dhamma, Myth and Tale | Tagged bangkok, Sayadaw, U Jotika | 2
(This article is reproduced from http://littlebang.wordpress.com. Please connect to the original blog to leave comments and reactions.)
Posted by The Bliss Of Emancipation at 10:09 AM0comments Links to this post
Labels: Dhamma Articles, Dhamma Talks (Audio), U Jotika
Many people have asked me how I felt at the time of my appointment at Acting Secretary General. They have been invariably surprised to learn that I did not feel the way most people would have felt in similar circumstances. To understand my feelings and my conception of the role of Secretary General – the nature of my religious and cultural background must first be understood. I should therefore like to outline not only my religious beliefs, but also my conception of human institutions and of the human situation itself.
AsaBuddhist, I was trained to be tolerant of everything except intolerance. I was brought up not only to develop the spirit of tolerance, but also to cherish moral and spiritual qualities, especially modesty, humility, compassion, and most important, to attainacertain degree of emotional equilibrium. I was taught to control my emotions throughaprocess of concentration and meditation. Of course, being human, and not yet having reached the stage of arahant or arhat (one who attains perfect enlightenment), I cannot completely “control” my emotions, but I must say that I am not really excited or excitable.
To understand my religious background,abrief explanation of certain ethical aspects of Buddhism will be necessary. Among the teachings of the Buddha are four features of meditation, the primary purpose of which is the attainment of moral and spiritual excellence: metta (good will or kindness), karuna (compassion), mudita (sympathetic joy), and upkkha (equanimity or equilibrium).
A true Buddhist practices his metta to all, without distinction; Buddhists need to apply in their daily lives the teachings of metta even to those whom they have never seen before, and will not see afterwards. “Just as the sun shines on all, or the rain falls on all, without distinction,” metta embraces all beings impartially and spontaneously, expecting nothing in return, not even appreciation. Metta is impersonal love or good will, the opposite of sensuous craving oraburning, sensual fire that can turn into wrath, hatred, or revenge when not required. A true Buddhist has to practice metta to friends and foes alike.
Karuna (compassion) is the second aspect of Buddhist meditation that all true Buddhists are expected to practice. This quality of compassion is deeply rooted in the Buddhist concept of suffering. Human life is one of suffering; hence, it is the duty ofagood Buddhist to mitigate the suffering of others, not only in his thought but also in practice. He shows his compassion or pity to all, be they living in this or in another world. (Buddhism believes in life after death.) Buddhist charity is best seen during the feasts or dana given to the poor or to homeless monks, who are provided with alms food withaview to the donor’s attainingahigher order of bliss in the other world. The regular practice of compassion opens one’s mind to the “Noble Truth of Suffering” and its origin. For the Buddha has taught us that suffering originates in craving and ignorance. Hatred, or instance, is the root of all evil.
Mudita (sympathetic joy) can best be defined as one’s expression of sympathy with other people’s joy. The happiness of others generates happiness in the mind ofagood Buddhist. Melancholy and pessimism have no place in the Buddha-dhamma or dharma (the cosmic and moral law governing the world, as formulated by the Buddha in his teachings.) One’s life gains in joy by sharing in the happiness of others, as if that happiness were one’s own. The person who cultivates altruistic joy radiates it over everyone in his surroundings, and thus everyone enjoys working and living with him. The practice of mudita not only dispels worry and frustrations but strengthens our moral fiber. Thusatrue Buddhist is expected to pray for the happiness of all human beings. By practicing mudita, one automatically renders as important service to the entire community.
Upekkha (equanimity or equilibrium or detachment) connotes the acquisition ofabalance of mind, whether in triumph or tragedy. This balance is achieved only asaresult of deep insight into the nature of things, and primarily by contemplation and meditation. If one understands how unstable and impermanent all worldly things and conditions are, one learns to bear lightly even the greatest misfortune that befalls one or the greatest reward that is bestowed on one. This lofty quality of even-mindedness or emotional equilibrium is the most difficult of all ethical virtues to practice and apply in our hectic world. To contemplate life, but not to be enmeshed in it, is the law of the Buddha.
To achieve upekkha, one has to meditate. The Buddha’s teaching regarding meditation aims at producingastate of perfect mental health, emotional equilibrium, and tranquility. But this concept of Buddhist meditation is very much misunderstood, both by Buddhists and non-Buddhists. The word “meditation” is generally associated withaparticularly posture, or musing on some kind of mystic or mysterious thought or going intoatrance. Such misunderstanding is mainly due to the lack of s suitable English word for the original term bhavana, which means mental culture or mental development. The Buddhist bhavana aims at cleaning the mind of impurities, such ill will, hatred, and restlessness; it aims at cultivating such qualities as concentration, awareness, intelligence, confidence, and tranquility, leading finally to the attainment of the highest wisdom.
In other words, through meditation I seek inner peace. I heartily agree with Father Dominique Georges Pire, winner of the Nobel Peace Prize, when he says: “I still think that to beapeacemaker, that is to sayaman of peace, one must first be at peace with oneself. One must achieve inner peace. This involves getting to know oneself and learning to control one’s impulses. Only then canapeaceful being approach the immense task of creating harmony between groups and between individuals.
It is far from my intention to claim that I have reachedavery high stage on the path to attainment of the highest wisdom, or that I have attained complete “inner peace”. I can claim, however, that I practice bhavana every day. I try to cultivate the ethical aspects of Buddhism, and I believe that I have attainedagreater degree of emotional equilibrium than most people. This explains why I received the tragic news of the sudden death (inatraffic accident) of my only son, Tin Maung Thant, on May 21, 1962, with minimal emotional reaction. For are not birth and death the two phases of the same life process? According to the Buddha, birth is followed by death, but death, in turn, is followed by rebirth.
The same minimal emotional reaction applied to the news brought to me on September 23, 1965, by the Norwegian permanent representative, Ambassador Sivert Nielson, that it was the intention of the Nobel Peace Committee in Oslo to award me the coveted prize for 1965. He showed me the letter addressed to him by the Nobel Peace Committee. My response was / is not the Secretary General merely doing his job when he works for peace? After Ambassador Nielsen left my office, my thoughts wandered to those who were more deserving of that prize than myself – those whose lifelong preoccupation had been the peace of the world, the welfare of mankind, and the unity of the human community: people like Paul Hoffman, Dr. S. Radhakrishnan, and many others. In any event, it was most gratifying to learn (on October 25) that UNICEF (the United Nations Children’s Fund), whose accomplishments in the humanitarian field no one questions, was the recipient of that prize.
Ref: MANDALA, (PP. 7-8)
Tower Road PO BOX 1442 S 9132
With Compliments of C. W. Printing
No. 83 Genting Lane # 04-02 Alhomied Building
Posted by The Bliss Of Emancipation at 4:03 PM0comments Links to this post
Posted by The Bliss Of Emancipation at 3:42 PM0comments Links to this post
ကျွန်တော့် အီးမေးလ်ထဲကို ရောက်လာတဲ့ နှစ်သစ်ကူးအတွက် Forward Mail လေးကို အားလုံးအတွက် ပြန်လည် လက်ဆောင်ပေးလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျား။
နှစ်သစ်အချိန်အခါမှာ အားလုံး ကုသိုလ်ကောင်းမှုတို့ ဖြင့် ထုံမွှမ်းပြီး မင်္ဂလာရှိစွာ ဖြတ်သန်းနိုင်ပါစေကြောင်း ဆုမွန်ကောင်းတောင်းအပ်ပါသည် ခင်ဗျား။
Publish at Scribd or explore others: Presentations & Spre buddhism
Posted by The Bliss Of Emancipation at 1:46 AM0comments Links to this post
လောကတွင် ယုံကြည်မှုသည် အရေးကြီး၏။ မည်သည့်နေရာတွင်မဆို ယုံကြည်မှုနှင့် အလုပ် လုပ်လုပ်ရ၏။ ဆက်ဆံရ၏။ သင်ယူ ရ၏။ ပြောဆို ဆွေးနွေးရ၏။
ယုံကြည်မှုကင်းမဲ့နေသော မိဘနှင့်သားသမီး၊ ဆရာနှင့် တပည့်၊ အလုပ်ရှင်နှင့် အလုပ်သမား၊ လင်နှင့်မယား၊ ဘုန်းကြီးနှင့် ဒကာ၊ သူငယ်ချင်း အချင်းချင်း မည်သို့မျှ ပေါင်းသင်းဆက်ဆံ၍ မဖြစ်နိုင်။ စီးပွားရေး၊ လူမှုရေး၊ ပညာရေး၊ နိုင်ငံရေး၊ ဘာသာရေး စသော အရေးပေါင်းများစွာတို့တွင် ယုံကြည်မှု မပါဘဲ မည်သည့်အရာကိုမျှ တည်ဆောက်၍ မရနိုင်။
ယုံကြည်မှု-ဆိုသော စကားလုံး သုံးလုံးတွင် အရေးပါသည်ကား ယုံနှင့်ကြည်ပင်ဖြစ်၏။ ယုံ၏ နောက်တွင် အရည်အချင်းသည် ကပ်လိုက်လာ၏။ ယုံဖို့အတွက် အရည်အချင်းရှိရမည်။ မိဘသည်လဲ မိဘအရည်းအချင်း၊ ဆရာသည်လဲ ဆရာ့ အရည်အချင်း စသည်ဖြင့် ကိုယ်စီကိုယ်စီမှာ အရည်အချင်းရှိဖို့လို အပ်၏။
ယုံမိပြီဆိုလျှင် ကြည်လင်လာတော့၏။ တစ်ဦးကို တစ်ဦး အပြစ်မမြင်။ လောက ဆိုရိုးစကား တစ်ခုလို။ ချစ်တဲ့သူမှာ အပြစ်ရှာ ဘယ်ခါ အပြစ်တွေ့မလဲ ဆိုသည်ပင်။ ဆိုလိုသည်မှာ ယုံကြည်မှု၏ နောက်တွင် ငြိမ်းချမ်းမှု၊ အားကိုလိုမှု၊ တိုင်ပင်လိုမှု စသည်တို့ ယှဉ်တွဲကပ်ပါလျက် ရှိသည်ဟု ဆိုလိုပါ၏။
ယုံကြည်မှု နှင့် ကိုးကွယ်မှုသည် တစ်ခုနှင့်တစ်ခု ဆက်စပ်လျက် ရှိကြ၏။ ယုံကြည်မှု မပါဘဲ ကိုးကွယ်မှု မဖြစ်နိုင်။ မိမိတို့ ကိုးကွယ်ထားသော ဘာသာတရားကို မိမိတို့ကိုယ်တိုင်က မယုံကြည်လျှင် ဘာသာတရား၏ အကျိုးပေး စောင့်ရှောက်မှုများကလည်း လျော့ပါးသွားနိုင်၏။
၁။ သာမန် ယုံကြည်မှု၊
၂။ အလယ်အလတ် ယုံကြည်မှု၊
၃။ အဆုံးစွန်ထိ ယုံကြည်မှုဟု သုံးမျိုး ခွဲခြားကြည့်နိုင်၏။
သာမန်ယုံကြည်မှုသည် မိရိုးဖလာ ယုံကြည်မှုကြောင့် ဖြစ်နိုင်၏။ မိဘနှစ်ပါး (သို့) ဘိုးဘွား အစဉ်အဆက် ကိုးကွယ်သည့် ဘာသာတရားများကို စဉ်းစားဝေဖန်မှု၊ ဆင်ခြင်သုံးသပ်မှု မပါဘဲ၊ ယုံကြည်ခြင်းမျိုးကို သာမန်ယုံကြည်မှုဟုဆိုနိုင်၏။
အလယ်အလတ် ယုံကြည်မှုများသည် စာပေများကို ဖတ်ရှုပြီး အသိဉာဏ်များ တိုးပွားလာခြင်း ကြောင့်ဖြစ်နိုင်၏။ သာမန် ပုဂ္ဂိုလ်တို့ထက် ပိုမို အဆင့်အတန်းရှိ၏။ အသိဉာဏ်လည်း ပိုမို ရှိ၏။ သက်ဆိုင်ရာ ဘာသာရေးစာပေများကို လေ့လာ ဖတ်ရှုလေ့လာ၏။ သက်ဆိုင်ရာ တရားဓမ္မများကို နည်းမျိုးစုံနှင့် နာကြား၏၊ သိလိုသည်များကို ဘာသာရေး ဆရာများအထံသို့ ချဉ်းကပ် မေးမြန်း၏၊ မိမိကိုယ်တိုင် တရားတော်အတိုင်း မကျင့်ကြံ အားမထုတ်နိုင်သည့်တိုင် နားလည် တတ်ကျွမ်းအောင် လေ့လာထား၏။ တစ်ပါးသူတို့အား မိမိကဲ့သို့ လုပ်ဆောင်နိုင်အောင် တိုက်တွန်း အားပေးခြင်းမျိုး ပြုလုပ်တတ်၏။ အရမ်းကာရော ယုံကြည်သည်မျိုး မဟုတ်ဘဲ စဉ်းစဉ်းစားစား ချင့်ချင့်ချိန်ချိန်ဖြင့် အကြောင်း အကျိုး၊ အကောင်းအဆိုးကို ခွဲခြားနားလည်နိုင်သည့် ဤကဲ့သို့သော ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးကို အလယ်အလတ် ယုံကြည်သူ ဟု ခေါ်ဆိုနိုင်၏်။
အဆုံးစွန်ထိ ယုံကြည်မှုဆိုသည်မှာ မိမိကိုးကွယ်သည့် ဘာသာတရားအတွက် အကာအကွယ် ပေးရမည်ဆိုလျှင် မိမိအသက်ကိုပင် စတေးဝံ့၊ စတေးခံနိုင်သည့် ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးကို ဆိုလို၏။ အဆုံးစွန်ထိ ယုံကြည်ကြသူများသည် လွယ်လွယ်ကူကူနှင့် ယုံကြည်သူများ မဟုတ်သည်ကတော့ သေချာပါ၏။
ငယ်ရွယ်သည့်အချိန် ကလေးငယ်တို့၏ ဦးနှောက်အသိဉာဏ်ထဲသို့ အတင်းရိုက်သွင်း၍ ဖြစ်စေ၊ အသိဉာဏ်ပညာ မရှိဘဲ မစဉ်းစား မချင့်ချိန်နိုင်၍ ဖြစ်စေ။ ထွက်ပေါက်ပိတ်နေသည့် အတွက်ကြောင့်ဖြစ်စေ၊ စာပေအများအပြားကို ဖတ်ရှုပြီး စာပေများမှ တစ်ဆင့် ဘာသာတရားများ နှိုင်းယှဉ်ဝေဖန်၍ ဖြစ်စေ၊ အသိထူး အကျင့်ထူးများကြောင့်ဖြစ်စေ၊ စသည့်အကြောင့်များကြောင့် အဆုံးစွန်ထိ ယုံကြည်မှုသို့ ရောက်သွားကြသော ပုဂ္ဂိုလ်များဖြစ်နိုင်၏။
အဆုံးစွန်ထိ ယုံကြည်မှုဆိုသည်မှာ မိမိ ယုံကြည်ကိုးကွယ်သည့် ဘာသာတရားအတွက် အကာအကွယ် ပေးရမည်ဆိုလျှင် “မိမိအသက်ကို မနှေး ပေးဆပ် စတေးဝံ့သူများ”ကို ဆိုလိုပါ၏။
ငယ်စဉ်အခါ ကလေးတို့၏ နုနယ်သည့် အသိဉာဏ်များကို အခြေခံလျှက် ဘာသာရေး သဘော တရားများ အတင်းအဓမ္မ သွတ်သွင်းကာ သံမှို ရိုက်စွဲထားသလို ရိုက်စွဲထား၏။ ထိုကလေးတို့သည် မိမိတို့ အသိဉာဏ်အပေါ် သွတ်သွင်းရိုက်နှိပ်ထားသော ဘာသာရေးတို့က သေသည့် တိုင်အောင် မပျောက်ပျက်နိုင်တော့ ။
အထူးသဖြင့် အကြောက်တရားများနှင့် ချိန်းခြောက်လျက် ရိုက်နှိပ်ထားသည့် ဘာသာရေးက ပိုမို စွဲမြဲ ခိုင်မာလှ၏။ ထိုအကြောက်တရားများကပင် စဉ်းစား ဆင်ခြင်မှု နည်းပါးလျှက် ဘာသာရေးကို အဆုံးစွန်ထိ ယုံကြည်မှုသို့ မရောက်ရောက်အောင် တွန်းပို့ပေးလိုက်တော့၏။
ငယ်စဉ်ကတည်းက စွဲမြဲခိုင်မာလာသည့် အကြောက်တရာများက အကြောင်း အကျိုး၊ အကောင်း အဆိုးကို မခွဲခြား မဝေဖန်နိုင်တော့။ ဆင်ခြင် စဉ်းစားဖို့အတွက်လည်း အချိန်မပေးနိုင်၊ ဦးနှောက်အသိဉာဏ် ကလည်း လက်မခံနိုင်တော့။ အကြောက်တရားများက စွဲမြဲခိုင်မာ၍ နေချေပြီ။
အသိဉာဏ်ပညာ နည်းပါးကြသော လူသားတို့အတွက် အဓိပ္ပါယ်ရှိသော လုပ်ရပ်၊ အဓိပ္ပါယ်မဲ့သော လုပ်ရပ်၊ တန်ဖိုးရှိသော လုပ်ရပ်၊ တန်ဖိုးမဲ့သော လုပ်ရပ်၊ မိမိအတွက်၊ မိမိနှင့် ပတ်သက်နေသည့် ဆွေမျိုး၊ အသိုင်းအ၀ိုင်း၊ မိမိနိုင်ငံ၊ လောက၏ ကောင်းကျိုး၊ ဆိုးကျိုး၊ ပတ်ဝန်းကျင်၏ ကောင်းကျိုး၊ ဆိုးကျိုး၊ စသည်တို့ကို နားမလည်၊ စိတ်မ၀င်စား၊ တိုက်တွန်းသူ ရှိလာပါကလည်း ကောင်းသည် ဆိုးသည်ကို နားမလည်၊ မဝေဖန် မပိုင်းခြားနိုင်၊ မိမိလုပ်လိုသော အရာက်ိုသာ တဇောက်ကန်းလုပ်တတ်ကြသဖြင့် အဆုံးစွန်ထိ ယုံကြည်မှုသို့ ရောက်မှန်းမသိ ရောက်သွားကြသော အစွန်းရောက် စတေးဝံ့သူများသာ ဖြစ်တော့၏။
ဘာသာရေးစာပေများကို ဖတ်ရှုလေ့လာကြသည့် လူသားတို့အဖို့ ဘာသာတရား အားလုံး၏ သဘောထားကို ခြုံငုံ သုံးသပ်မိကြသဖြင့် ပို၍ တန်ဖိုးရှိသော ဘာသာတရားကို ရှာဖွေတတ်လာ၏။ ဘာသာတစ်ခုနှင့်တစ်ခု၊ အမှန်နှင့်အမှား၊ အဆိုးနှင့်အကောင်းကို နှိုင်းနှိုင်းချိန်ချိန်ဖြင့် ဆင်ခြင်ဆုံးဖြတ် တတ်လာ၏။
ဘာသာရေးအသိဉာဏ်များ ကြွယ်ဝလာသည်နှင့်အမျှ ပို၍ မြင့်မြတ်သည့် ဘာသာတရားကို ကိုးကွယ် ယုံကြည်တတ်လာပြီး၊ မိမိယုံကြည် ကိုးကွယ်သည့် ဘာသာတရားကိုလည်း အသက်တမျှ ယုံကြည်ကိုးစားကာ “အဆုံးစွန်ထိ ယုံကြည်မှုသို့” ရောက်အောင် ပို့ဆောင်ပေးလိုက်တော့၏။ အဆုံးစွန်ထိ ယုံကြည်မှုသို့ ရောက်ရှိခြင်းသည် ဘ၀၏ အမှန်တရား၊ ဘ၀၏အဓိပ္ပါယ်၊ ဘ၀၏ အလှသစ္စာတရား၊ ဘ၀၏ အမြင့်မြတ်ဆုံး ပန်းတိုင်သို့ ရောက်ခြင်းပင်ဖြစ်တော့၏။
လူသားတို့၏ အဆုံးစွန်ထိ ယုံကြည်မှုများသည် ဘာသာတရားအတွက် ဖြစ်ကြသောကြောင့် ကြည်ညိုလေးစားစရာ ကောင်းလှ၏။ သို့သော် မိမိတို့ စတေးနေသော ဘာသာတရားသည် အမှန်တကယ် စတေးသင့်သော ဘာသာတရားဖြစ်ပါ၏လော? ဆိုသည့် မေးခွန်းကိုတော့ သေသေချာချာ စဉ်စားသင့်ကြ၏။
ဥပမာ ဘာသာတရားက မိမိအတွက် အသက်အန္တရာယ် ပေးမှာကို ကြောက်သဖြင့် မိမိအသက်ကို စတေးဝံ့သည်လော?၊ ထိုသို့မဟုတ် ဘာသာတရားကြောင့် မိမိ၊ မိမိဆွေမျိုး၊ အသိုင်းအ၀ိုင်းစသည်များ ရာထူးအာဏာပါဝါ၊ သြဇာ၊ အင်ပါယာများ တိုးတက်လာမည်။ စည်းစိမ်ဥစ္စာများ တိုးတက်လာမည်။ ပညာရပ်တွေ အတိုင်းအဆ မရှိနိုင်လောက် တတ်မြောက်လာမည်၊ တီထွင် ကြံဆနိုင်လာမည်။ ထို့အတွက်ကြောင့် ယင်းဘာသာကို မိမိနှင့် ဆက်စပ်နေသည့် အတ္တလောကအတွက် ရည်ရွယ်၍ အသက်ကို စတေးဝံ့သည်လော?။
သို့မဟုတ် ယင်းဘာသာတရားက မိမိ၏ ဘ၀လမ်းကြောင်းမှန်ကို ညွှန်ပြပေးသည့်အတွက်၊ မိမိနှင့် ဆက်စပ်နေသည့် ပတ်ဝန်ကျင်ကို ကောင်းကျိုးပြုသည့်အတွက် အသက်ကို မနှေး ပေးဆပ်ဝံ့သည်လော?။
အသက်ကို စတေးဝံ့လောက်သည့်အထိ ပေးဆပ်မှုသည် သာမန်အားဖြင့် မဖြစ်နိုင်၊ မဖြစ်သင့်သည် ကိုတော့ လူသားအားလုံး သတိမူသင့် စဉ်းစားသင့်ကြသည်ဟု ထင်မြင်မိ၏။
လူသားများတွင် ငယ်ရွယ်နုနယ်သည့်အချိန်တွင် အသိပညာ မကြွယ်သေးခြင်း၊ ကလေးတို့၏ မှတ်စိတ် သိစိတ်များသည် အရောင်းမစွန်းထင်းသေးဖြင့် အဖြူထည်သက်သက်နီးပါး ဖြစ်ခြင်းတို့ကြောင့် ဘာသာတရား လူ့ယဉ်ကျေးမှုများကို သက်ဆိုင်ရာ မိဘတို့က သင်ကြားပေးရသည်မှာ လွယ်ကူလှ၏။
ဆရာ ဆရာမတို့ကလည်း စွမ်းနိုင်သည့်အလျော်က် သင်ကြားပေးကြ၏။ မိဘ ဆရာတို့ သင်ကြား ပေးလိုက်သော ဘာသာတရား လူ့ယဉ်ကျေးမှုများကို မှတ်သား နာခံ၍ အချိန်တန် အရွယ်ရောက် လူလား မြောက်သောအခါ မိဘဆရာသမားတို့ သင်ကြားပေးလိုက်သည့်အတိုင်း လူလိမ္မာ လူယဉ်ကျေးများ အများ အပြား ပေါ်ပေါက်လာကြတော့၏။
ယခုခေတ်တွင် လူသား အတော်များများသည် စီးပွားရေး၊ လူမှုရေး၊ ပညာရေး စသည်ဖြင့် အရေးပေါင်းများစွာတို့ဖြင့် လုံးလည်ချာလည် လိုက်နေကြရာ၊ မိဘ ဆရာသမားများက မိမိတို့၏ သားငယ် သမီးငယ် တပည့်ငယ်တို့အား စိတ်ရောကိုယ်ပါ ဘာသာတရား လူ့ယဉ်မှုများကို မသင်ပေးနိုင်ကြတော့ချေ။
ထိုအခါ ငယ်ရွယ်သူ သား သမီး တပည့်တို့အတွက် လူလိမ္မာ လူယဉ်များ ဖြစ်ထွန်း ပေါ်ပေါက်စေ ဖို့မှာ ထိတ်လန့်စရာ အသွင်တစ်ရပ်အဖြစ် တည်ရှိနေတော့သည်။
“တာဝန်သိသူမှာ တာဝန်ရှိ၏”ဟု ရှေးပညာရှိကြီးများ မိန့်ဆိုခဲ့ကြ၏။ လူလိမ္မာ လူယဉ်ကျေးများ အသီးသီး ပေါ်ပေါက်၍ ကမ္ဘာလောကကြီး ငြိမ်းချမ်းစေရန်။ လူသားများတွင် အတ္တမာနများ နည်းနိုင်သမျှ နည်းပါးစေရန် တာဝန်သိကြသော လူသားတိုင်းမှာ တာဝန်ရှိကြ၏။ အထူးသဖြင့် မိဘများနှင့် ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တို့မှာ အဓိကအားဖြင့် တာဝန်ရှိလာ၏။
တာဝန်သိရှိသည်ကို တာဝန်သိမှုနှင့် နှို်င်းချိန်၍ မိမိပိုင်ဆိုင် နိုင်းနင်းသည့်အလျောက် ဘာသာရေးနှင့် ဆက်နွယ်နေသည့် လူ့ယဉ်ကျေးမှုများကို တာဝန်ယူ လုပ်ဆောင် ဖြေရှင်း သင်ပေးကြလျှင် ယနေ့လူငယ်လေးများသည် နောင်တစ်ချိန်တွင် လူကြီးလူကောင်းများ၊ သားကောင်း၊ သမီးကောင်းများ၊ နိုင်ငံသားကောင်း၊ သမီးကောင်း၊ ကမ္ဘာ့သားကောင်း သမီးကောင်းများ။ တပည့်ကောင်း တပည့်မြတ် တပည့်မွန်များ အမှန်တကယ် ဖြစ်ထွန်း ပေါ်ပေါက်လာမည်မှာ အမှန်မုချပင်။
ဆိုလိုသည်မှာ လူသားအားလုံး ယဉ်ကျေးလိမ္မာစေဖို့၊ ကိုယ်ချင်းစာတရား ထားရှိနိုင်ဖို့၊ အတ္တမာနများ ကင်းစင်နိုင်သမျှ ကင်းစင်နိုင်ဖို့အတွက် လူသားအားလုံးမှာ တာဝန်ရှိ၏။ ထို့ထက် မိဘ၊ ဆရားသမားတို့မှာ ပို၍တာဝန်ရှိ၏။ တာဝန်အရှိဆုံးမှာ ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တို့ပင် ဖြစ်တော့၏။ တာဝန်ရှိသူများ ကိုယ်တိုင်က ယဉ်ကျေးလိမ္မာ ကိုယ်ချင်းစာတရားမရှိ၊ အတ္တမာနကို ရှေ့တန်းတင်၍ မိမိကိုယ်ကျိုးအတွက်သာ စဉ်းစားနေကြလျှင် သားငယ် သမီးငယ် တပည့်ငယ်တို့ နောင်ရေးမှာ ရင်လေးစရာပင်ဖြစ်တော့၏။
လူသားတို့က မိမိတို့ ဖြစ်စေချင်သည့်အတိုင်း ငယ်ရွယ်သည့် အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်လေးများကို မိမိတို့ လိုအပ်သည့် ပုံစံအတိုင်း ပုံစံသွင်း သင်ကြားပေးကြ၏။ ထိုက်သင့်သလောက် တတ်မြောက်သည်ကိုလ့ည်း လူတိုင်း သိရှိကြ၏။ ထိုသို့ဆိုလျင် မိဘ၊ ဆရာသမား၊ ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တို့က ကလေးများ အသိပညာ နုနယ်သည့်အချိန်တွင် မိမိတို့ ဖြစ်စေချင်သည့်အတိုင်း လူ့ယဉ်ကျေးမှု တရားများ၊ ကိုယ်ချင်းစာ တရားများကို ပုံစံသွင်း သင်ကြားပေးလိုက်လျှင် ပို၍ အဆင်ပြေနိုင်မည် ထင်ပါ၏။
ဗြိတိန် နိုင်ငံက စစ်ဗိုလ်ချုပ်တစ်ဦး ရေးသားထားသော စာတစ်ပိုဒ်ကို သတိရမိ၏။ “ကလေးငယ်များ အား၊ ဘာသာတရား ယဉ်ကျေးမှုမပါဘဲ ပညာရေးသက်သက်ကိုသာ သင်ကြားပေးလိုက်ပါ။ အရွယ်ရောက် လူလားမြောက်သောအခါ ပရိယာယ်ကြွယ်ဝေသော လူယုတ်မာကြီး ဖြစ်သွားပါလိမ့်မည်”ဟု သူက ဆိုခဲ့၏။ စဉ်းစားစရာ တွေးတောစရာပင်။
လူသားတို့၏ ယုံကြည်မှုသဘောတွင် အသိမကြွယ် ကလေးငယ်တို့ဘ၀က အလွန်ဖြူစင်၏။ ကလေးတို့၏ ယုံကြည်မှုသည် အလွန်ရိုးသား ဖြောင့်မတ်၏။ ကောက်ကျစ်စဉ်းလဲမှုတို့ မရှိ။ ထိုကလေးငယ်တို့၏ အဖြူရောင် အသိဉာဏ်ပေါ်တွင် ယုံကြည်ခြင်း၊ ယဉ်ကျေးခြင်း၊ စာနာနားလည်ခြင်း၊ အတ္တမာနများ ကင်စင်စေခြင်း၊ စသည့် မြင့်မြတ်သည့် ဘာသာရေး အရောင်များ ဆိုးပေးလိုက်သောအခါ မိဘ၊ ဆရာ၊ ဘာသာရေး ခေါင်းဆောင်တို့ ဆိုးလိုက်သည့် အရောင်အတိုင်း စိတ်ကြိုက်ပုံစံများ အများအားဖြင့် ထွက်ပေါ်လာတော့၏။
မိမိကိုးကွယ်သည့် ဘာသာတရားကို ယုံကြည်မှုရှိခြင်းကြောင့် လိမ္မာ ယဉ်ကျေးလာခြင်း၊ ကြီးသူကို ရိုသေ၊ ရွယ်တူကို လေးစား၊ ငယ်သူကို သနားတတ်လာခြင်း၊ “ငါလိုလူ မရှိ”ဟူသည့် အတ္တမာနများ ကင်းစင်လာခြင်း၊ လောကကောင်းကျိုး ပတ်ဝန်ကျင်ကောင်းကျိုးများ ဆောင်ရွက်တတ်လာခြင်း၊ ချမ်းသာသူကို တွေ့လျှင် မနာလိုမှု ၀န်တိုမှုများ ကင်းစင်လာပြီး ၀မ်းမြောက်သော စိတ်ထားများ ထားတတ်လာခြင်း၊ ဆင်းရဲသူ ကိုယ့်ထက်နိမ့်ပါးသူတို့နှင့် တွေ့သောအခါ မိမိအတ္တကို ရှေ့တန်းမတင် တော့ဘဲ ကိုယ်ချင်းစာတရားများထား တတ်လာခြင်း၊ ရိုင်းပင်း ကူညီလိုသည့် စိတ်ဓာတ်များ တဖွားဖွား ပေါ်ပေါက်လာခြင်း၊ စသည့် ကောင်းကျိုးတရားတို့သည် ဘာသာတရားကို ကိုးကွယ်ယုံကြည်ခြင်းကြောင့် ရရှိလာသော အကျိုးရလဒ် အသီးအပွင့်များပင်ဖြစ်တော့၏။
ဘာသာတရား စစ်မှန်လျှင် မည်သည့် လူသားကိုမဆို ဆင်းရဲမှု ပူပန်မှု စိုးရိမ်မှု ကြောင့်ကြမှု ပယ်ဖျောက်ပေးနိုင်သည့် နည်းလမ်း အစစ်အမှန်ရှိရ၏။
နည်းလမ်းကောင်းမှ၊ ဘာသာတရား စစ်မှန်မှ လူသားတို့သည် ပျော်ရွှင်မှု၊ ငြိမ်းချမ်းမှုများကို ရရှိနိုင်မည်ဖြစ်သည်။
ဘာသာရေးသည် တစ်ဘ၀စာ မဟုတ်သည့်အတွက် လူသားတို့ အခြေခံမှစ၍ သတိထားသင့်၏။ ထို့ကြောင့် မည်သည့်ဘာသာသည် ဘာကြောင့် ပေါ်ပေါက်လာရသနည်း?။ ဘယ်လိုနည်းမျိုးနှင့် ပေါ်လာရသနည်း?။ ကျင့်စဉ်က အဘယ်သို့ ရှိသနည်း?။ ယင်းကျင့်စဉ်သည် မည်သို့ မည်ပုံ အားထုတ်ရသနည်း?။ စသည့် စသည့် မေးခွန်းပေါင်းများစွာကို လူသားတိုင်း လေ့လာစစ်ကြောရပေ လိမ့်မည်။
စစ်မှန်သည့် ဘာသာတရားဖြစ်ဖို့ တည်ထောင်သည့် ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်၏ အကျင့်၊ စရိုက်၊ ၀ါသနာ၊ အနစ်နာခံမှု စသည်တို့ကို မည်သည့်ဘာသာဝင် မဆို အခြေခံ ကျကျ လေ့လာ ဆည်းပူးသင့်၏။ အခြေခံမှ စ၍ မလေ့လာ မဆည်းပူးလျင် သာမန်ယုံကြည်မှု (သို့) မိရိုးဖလာ၊ အစဉ်အလာအရ ကိုးကွယ်ကြသူများ ဖြစ်ကြပေတော့မည်။
လောကတွင် မည်သည့် ဘာသာရပ်ကိုမဆို သင်ကြားတတ်မြောက်လိုလျှင် အခြေခံမှ၍ ကျနစွာ ဆည်းပူး သင်ယူရ၏။ အခြေခံများ မကောင်းဘဲ ကြီးမားသည့် မည်သည့်အောင်မြင်မှုမျိုးကိုမှ မရနိုင်။
အခြေခံ အုတ်မြစ် မကောင်းသည့် အထပ်ပေါင်းများစွာ မြင့်မားသည့် အဆောက်အဦးကို တည်ဆောက်လျှင် မြင့်မားလေလေ မြန်မြန် ပြိုကျ ပျက်စီးလေလေပင် ဖြစ်တော့၏။
အခြေခံမပါသော ပညာသင်ယူ ဆည်းပူသူတို့သည်လည်း အထက်တန်းရောက်လေ၊ ပညာတတ်သူ၊ အသိဉာဏ်ရှိသူတို့ ရှေ့မှောက်သို့ ရောက်ရှိလေ၊ ခေါင်းမဖော် မျက်နှာ မပြ၀ံ့ဘဲ ပျက်စီး အရှက်ကွဲရလေလေ သာ ဖြစ်တော့၏။ ပညာတတ်၊ ပညာရှိ၊ အသိဉာဏ်ရှိသူ ဖြစ်ချင်လျှင် အခြေခံကောင်းဖို့ လိုသည်မှာ သိသာ ထင်ရှားလှ၏။
ထို့ထက် ပို၍ပို၍ အရေးကြီးသည်မှာ ဘာသာတရားသို့ ချဉ်းကပ်လိုသူ ဘာသာတရား ရှိချင်သူတို့သည် မိမိတို့ ကိုးကွယ် ယုံကြည် ချဉ်းကပ် ဆည်းကပ်လိုသည့် ဘာသာတရား မူရင်း အခြေခံများကို မမေ့ မလျော့ မပေါ့ဆဘဲ အခြေခံမှ စ၍ ကောင်းမွန်စွာ လေ့လာစေလိုပါကြောင်း အသိပေးရင်း။ အခြေခံများ ကောင်းစေချင်။
စာရေးသူ ရေးသားခဲ့ပြီးသော “ရင်းနှီးမှုနှင့် ရလဒ်များ” စာအုပ်ရှိ နိဒါန်းကို အခြေခံ၍ ဤစာမူကို ပြန်လည်ရေးသား ပညာဒါနပြုလုပ်ခြင်းဖြစ်ပါကြောင်း။
Posted by The Bliss Of Emancipation at 11:26 AM0comments Links to this post
Labels: ဦးပညာ (မန်းတက္ကသိုလ်)
ကမ္ဘာပေါ်တွင် လူသားများ သန်းပေါင်း ထောင်နှင့်ချီ၍ ရှိကြသည်။ ထိုလူသားများတွင် လိုချင်မှု အမျက်ထွက်မှု၊ တွေဝေငေးမောမှုများ လူတိုင်း ကိုယ်စီ ရှိကြ၏။
လိုချင်မှု၏ နောက်ကွယ်တွင် တပ်မက်မှု၊ သံယောဇဉ် ရှိမှု စသည်တို့နှင့် ဆက်နွှယ်နေသော လောဘအရင်းခံသည့် အကြောက်တရားများ၊ ပူပန်စိုးရိမ်မှုများ၊ ထိတ်လန့်စရာများ ရှိကြပြန်၏။
ထိုအကြောက်တရားများ ပူပန်စိုးရိမ်မှုများ၊ ထိတ်လန့်စရာများ ကွယ်ပျောက်စေရန် လူသားတို့သည် မိမိတို့၏ စိတ်ကို အေးငြိမ်းအောင် လုပ်ဆောင် ရှာဖွေကြရင်းဖြင့် လူသားတို့၏ အတ္တနှင့် လောဘကို အခြေခံလဆက် ဘာသာတရားများ အသီးသီး ပေါ်ပေါက်လာရခြင်းဖြစ်၏။
လူသားတိုင်းသည် ဘ၀၏ ငြိမ်းချမ်းခြင်း၊ ပျော်ရွှင်ခြင်း စသည်တို့ကို အလိုရှိကြ၏။ လူသားတို့ အလိုရှိကြသော အရာများသည် စိတ်၏ ခံစားမှုနှင့် လိုရင်းအားဖြင့် သက်ဆိုင်၏။
လူသားတို့က ရုပ်ဒြဗ် ပစ္စည်းဝတ္ထုများနှင့် အဆောင်အယောင်များက ငြိမ်ချမ်း ပျော်ရွှင်များကို ပြည့်ပြည့်၀၀ ပေးနိုင်မည်ဟု မျှော်လင့်နေကြ၏။ သို့သော် ထိုအရာများက အဆုံးစွန်အထိ ပြည့်ပြည့်၀၀ မပေးနိုင်ကြ။ တဒင်္ဂခဏသာ ဖြေဆည်ရာအဖြစ် ပေးစွမ်းနိုင်ကြပြီး ကြာတော့လည်း ရိုးအီ သွားကြပြန်၏။
ဘာသာတရားများကသာ လူသားတို့ အလိုရှိနေသော စိတ်၏ ငြိမ်းချမ်းခြင်း၊ ပျော်ရွှင်ခြင်းများကို ထာဝစဉ် ပေးစွမ်းနိုင်ကြ၏။ ထို့ကြောင့် ဘာသာတရားများကို အသိဉာဏ်ရှိသော လူသားတို့ ရှာဖွေ ဆည်းကပ် ကိုးကွယ်ကြခြင်း ဖြစ်ပေမည်။
သို့သော် မိမိတို့ ကိုးကွယ်နေသည့် ဘာသာတရားက စိတ်၏ ပျော်ရွှင်ငြိမ်းချမ်းမှုများ အမှန်တကယ် ပေးနိုင်၊ မပေးနိုင် ဆိုသည်ကိုတော့ အသိဉာဏ်ရှိသော လူသားတို့ အသေအချာ စိစစ် စဉ်းစားရာ၏။
ဘာသာတရားများသည် ကိုးကွယ်သူ လူသားများအား ကောင်းကျိုးချမ်းသာများကို ပေးစွမ်းနိုင်ကြသလို၊ ဆိုကျိုးများကို ပေးစွမ်းနိုင်ကြပါသလော?၊ ဘာသာတရား ကိုးကွယ်ခြင်းကြောင့် ရရှိနိုင်သော အကျိုးအပြစ်တို့ကိုလည်း သတိချပ်သင့်လှ၏။
လူ့ဘ၀သည် တန်ဖိုး အလွန်ကြီးမားလှ၏။ တန်ဖိုးကြီးမားသော လူ့ဘ၀ကို ရရှိသော လူသားတို့အဖို့ မိမိကိုယ်ကို မိမိ ဂုဏ်ယူသင့်၏။ လူသားသည် အသိဉာဏ်ပညာရှိ၏။ စဉ်းစားတွေးခေါ်တတ်၏။ အကောင်းအဆိုးကို သိ၏။ ဆင်းရဲမျိုးစုံကို ခံစားကြရသည့်အခါ ပူပန်မှု သောကတွေက တသီတတန်း။ ချမ်းသာသုခကို ခံစားကြရသည့်အခါ ပျော်မဆုံး ရွှင်မဆုံး တပြုံးပြုံး။ ပြုံးတစ်လှည့် မဲ့တစ်ခါ လူ့ဘ၀ လူ့အရသာများကို ခံစားကြ၏။
ချမ်းသာသုခကို ခံစားကြရသည့်အခါ လူ့ဘ၀ လူ့လောကကြီးကို မေ့လျော့ နေတတ်ကြသော်လည်း ဆင်းရဲဒုက္ခကို ခံစားကြရသည့်အခါ အားကိုးရာကို အလျင်အမြန် ရှာဖွေကြတော့၏။ အချို့လူသားက မိဘတွေကို အားကို၏။ အချို့က ဆွေမျိုး၊ အချို့က ညီအစ်ကို မောင်နှမ၊ အချို့က အာဏာပိုင် အဖွဲ့အစည်း၊ အချို့က ဗေဒင်ဆရာ၊ အချို့က ဘိုးတော်၊ နတ်ကတော်၊ အချို့ ရိုးရာနတ်များ စသည်ဖြင့် အားကိုရာကို အသီးသီး ရှာဖွေကြ၏။
မိမိတို့ ရှာဖွေကြသော အားကိုးရာများသည် အမှန်တကယ်ပင် အားကိုးထိုက်ပါသလော?။ ဆင်းရဲဒုက္ခ သောကဝေဒနာမီးများကို ဆုံးခန်းထိအောင် ဖယ်ရှားပေးနိုင်သည့် စွမ်းရည်သတ္တိထူးများ ရှိပါသလော။ စဉ်းစား ဆင်ခြင် သုံးသပ်၍ ဘာသာတရား ကိုးကွယ်မှုအတွက အသေအချာ စဉ်းစား ဆုံးဖြတ်ကြရာ၏။
လူသားတို့ အမိဝမ်းကြာတိုက်၌ ကိန်းအောင်း (ပဋိသန္ဓေ) နေခဲ့ချိန်မှ စ၍ ဆင်းရဲမျိုးစုံ အဖုံဖုံကို ခံစားခဲ့ကြရ၏။ မိခင်၏ အသွားအလာ အစားအသောက် အနေအထိုင် မဆင်ခြင်မှုတို့ကြောင့် ရင်သွေးများ ဆင်းရဲမျိုးစုံ အဖုံဖုံကို ပို၍ပို၍ ခံစားကြရန်၏။
တဏှာ လောဘစသည့် ကိလေသာတရားများ ဖုံးလွှမ်း ဖိစီး နှိပ်စက်မှုတို့ကြောင့် ကြီးပြင်းလာသောအခါ ကိုယ်ဝန်ရှိစဉ်က ခံစားခဲ့ရသော ဆင်းရဲမှုများကို လူသားတို့ အမှတ်မရ သတိမရကြတော့ချေ။
များသောအားဖြင့် အမိဝမ်းကြာတိုက်မှ မွေးဖွားလာကြသည့် လူသားအားလုံးလိုလို “ငိုခြင်းသဘော”ဖြင့် လူ့လောကထဲ ၀င်ရောက်လာကြခဲ့၏။ လူ့လောက လူ့ဇာတ်ခုံပေါ်သို့ ကန့်လန့်ကာဖွင့် ၀င်ရောက်လာကြသော ဥမမယ်အရွယ် ကလေးငယ်တို့၏ ငိုခြင်းသဘောကိုလည်း အသိဉာဏ်ရှိသော လူသားတို့ စဉ်းစားတွေးခေါ် စစ်ကြော ဝေဖန်သင့်လှ၏။
လူသားတို့ မွေဖွားလာခဲ့ချိန်မှ စတင်၍ စကားပြောတတ်ရန် ၅-နှစ်သား အရွယ်လောက်အထိ အမိအဖတို့၏ သွန်သင် ဆုံးမမှုများအောက်တွင် နေကြရ၏။ ထို့နောက် အတတ်ပညာ ရှာဖွေခြင်းစသည်ဖြင့် အနှစ် ၂၀-ခန့် အချိန်ကုန်ဆုံးကြရပြန်၏ ဘွဲ့ရ၍ အတတ်ပညာ၊ အသိပညာများ သင်ကြားချိန် ပြီးဆုံးသွားပြန်တော့လည်း အနားမနေရ၊ လူ့လောက လူ့ပတ်ဝန်းကျင်တွင် လူတန်းစေ့ နေထိုင်နိုင်ရေးအတွက် စီးပွားဥစ္စာများ ရှာဖွေကြရပြန်၏။
လူတန်းစေ့ နေထိုင်နိုင်ပြီဟု ယူဆကြသော်လည်း လူ့အသုံးအဆောင် ဇိမ်ခံပစ္စည်းများက တစ်နေ့တစ်မျိုး မရိုးနိုင်အောင် နေ့စဉ်နေ့တိုင်းလို သစ်လွင် ပေါ်ထွက်နေ့သည့်အတွက် ခေတ်နှင့် ရင်ဘောင်တန်းရင်း (သို့) အမီလိုက်ရင်း၊ သားရေး သမီးရေး၊ အိမ်ထောင်ရေး၊ လူမှုရေး၊ စီးပွားရေးစသည်ဖြင့် အရေးကိစ္စ မြောက်များစွာတို့၏ လွှမ်းမိုးမှုအောက်တွင် ခေတ်ရေစီးကြောင်းအတိုင်း မျောပါသွားကြရင်း အချိန်တွေ ကုန်ဆုံးမှန်းမသိ ကုန်ဆုံးသွားကြရတော့၏။
အချိန်တွေ ကြာလာသည်နှင့်အမျှ အသက်အရွယ်တွေ ကြီးရင့်လာကြ၏။ နောက်ဆုံး ဘ၀၏ သဘောတရားများ၊ ဘ၀၏ အဓိပ္ပါယ်နှင့်တန်ဖိုး၊ ဘ၀၏အမှန်တရားများ၊ အသက်ရှင်နေထိုင်ခြင်း၏ အကျိုးသက်ရောက်မှုများကို မရှာဖွေမိကြတော့ဘဲ သက်တမ်းချိန်များ ကုန်ဆုံးသွားကြရပြန်တော့၏။
ချမ်းသာခြင်းနှင့် ဆင်းရဲခြင်း၊ ပညာတတ်ခြင်းနှင့် ပညာမတတ်ခြင်း၊ ရာထူးအာဏာ ပါဝါရှိခြင်းနှင့် မရှိခြင်း၊ ရုပ်ချောခြင်းနှင့် ရုပ်ဆိုးခြင်း-စသည်ဖြင့် အဆင့်အတန်းခွဲခြားကြ၊ ကွဲပြားကြသော လူသားတို့အတွက် အဆင့်အတန်း ခွဲခြား၍ မရနိုင်သည်ကား “မွေးဖွားခြင်း၊ ရှင်သန်ခြင်း၊ သေဆုံးခြင်း”ပင် ဖြစ်တော့၏။ ထိုအရာကို ပညာရှင်ကြီးတို့က ဘ၀၏ တူမြဲတရား သုံးပါးဟု ကင်ပွန်းတပ်ခဲ့ကြ၏။
လူဘ၀ရောက်လာသူ လူသားအားလုံး အရင်းမရှုံးဖို့ အရေးကြီး၏။ အမြတ်မရနိုင်စေကာမူ အရင်းအတိုင်း ပုံမှန်လေးတော့ လည်ပတ်စေချင်၏။ နောင်ဘ၀ဆိုသည်မှာ မသေချာသော်လည်း ဒီဘ၀လေးမှာတော့ ငြိမ်းချမ်း ပျော်ရွှင် စေချင်ပါ၏။
လူ့ဘ၀တွင် စီးပွားဥစ္စာ ရှာဖွေခြင်းနှင့် ပတ်သက်၍ အရင်းရှုံးသွားလျင် ယုတ်စွအဆုံး တစ်တ၀စာအတွက် နလန်မထူနိုင်ခြင်း ဖြစ်နိုင်သော်လည်း လူ့ဘ၀အရင်းအနှီးကြီး ဆုံးရှုံးသွားပါက တစ်သံသရာလုံး နလန်မထူဘဲ ရှိချေတော့မည်။
ပြောင်းလဲလာသော ခေတ် စနစ်တို့အရ အရာအားလုံးတို့သည် ထိန်းချုပ်၍ မရ၊ ဖြစ် ပျက် ပြောင်းလဲမှုတို့က မြန်ဆန်လွန်းလှ၏။ အရာအားလုံးတို့ တိုးတက်ဖြစ်ထွန်းလာ၏။ အရာအားလုံးတို့ ဆုတ်ယုတ်ပျက်စီးသွားပြန်၏။ တိုးတက်ဖြစ်ထွန်းလာသည်ကား ရုပ်ဒြဗ် ပစ္စည်းဝတ္ထုများ၊ ဆုတ်ယုတ် ပျက်စီးသွားသည်ကား စိတ်ဓာတ် ယဉ်ကျေးမှုများ၊ စဉ်းစားဖို့တို့တော့ လိုမည်ထင်ပါ၏။
ရုပ်ဒြဗ်ပစ္စည်းတို့ တစ်နေ့တစ်မျိုး မရိုးနိုင်အောင် ပေါ်ထွက်လျက် ရှိကြ၏။ တစ်ခုကို သုံးလို့မှ အားမရသေးခင် အခြားတစ်ခုက အဆင်သင့် အစားထိုး ၀င်ရောက် နေရာယူနှင့်နေပေပြီ။ ရုပ်ဒြဗ် ပစ္စည်းဝတ္ထုများ တိုးတက်ဖွံ့ဖြိုးလာသလို စိတ်ဓာတ်ယဉ်ကျေးမှုများလည်း တိုးတက်ဖွံ့ဖြိုးလာလျှင် သိပ်ကောင်းမှာ-ဟု တွေးနေမိ၏။ ထိုအတွေး၏ နောက်ကွယ်တွင် အရေးပါလှသော ကလေးတို့၏ ဘ၀ကို စဉ်းစားမိလာ၏။
ယနေ့တော့ ကလေးဘ၀၊ နောင်သော်လူကြီး၊ ယနေ့တော့ တပည့်၊ နောင်သော် ဆရာ၊ ယနေ့ သားသမီး၊ နောင်သော် မိဘ စသည်ဖြင့် ပြောင်းလဲနေရသည်က ဓမ္မတာ။ လူတိုင်းတွင် တာဝန်ကိုယ်စီ ရှိကြ၏။ ထိုတာဝန်း ၀တ္တရာများကိုလည်း မြတ်ဗုဒ္ဓက အသီးအသီး ညွှန်ကြားထားရှိပြီးဖြစ်၏။ ကိုယ့်တာဝန် ကိုယ်ကျေဖို့တော့ လိုမည်ထင်ပါသည်။
အချုပ်အားဖြင့် လူသားတို့ အားကိုးရာကို ရှာဖွေကြရာတွင် လမ်းဖြောင့် လမ်းမှန်ရောက်ဖို့ အရေးကြီးလှ၏။ ကိုယ်မလုပ်ဆောင်နိုင်သည်နှင့် အမှားများ၊ အသုံးမ၀င်၊ အသုံးမကျသည့် အရာများဟု မဝေဖန်သင့်။ မထင်မြင် မယူဆသင့်၊ လုပ်ဆောင်နိုင်သည်များကို ရွေးချယ် စုစည်း၍ လုပ်ဆောင်သွားကြရပေအုံးမည်။
ကိုယ်ရရှိထားသည့် ဘ၀၊ စည်းစိမ်အပေါ် သာယာ ယဇ်မူး၍ ဇိမ်ခံကာ အလုပ် ဆက်မလုပ်လျှင် စည်းစိမ်ဥစ္စာများ တစ်နေ့တစ်ခြား ပျက်စီး ဆုတ်ယုတ်နိုင်သည်ကို သတိမူသင့်သလို။ အတိတ်ဘ၀က ရရှိထားသည် ကုသိုလ်ကံအပေါ် ရောင့်ရဲတင်းတိမ်၍ ကောင်းမှု ကုသိုလ်များကို ထပ်မံ မပြုလုပ်တော့လျှင် ကောင်းမှုကံ ကုန်ဆုံး ပျက်သုဉ်း၍ မကောင်းသည့် ဘုံဘ၀များသို့ ပြန်လည် ရောက်ရှိသွားနိုင်ကြောင်းကိုလည်း သတိမူသင့်၏။ ယခုလက်ရှိ ရထားသည် ဘ၀မျိုးလေး ပြန်မရနိုင်ကြလျှင် ဘ၀အရင်းပါ ဆုံးရှုံးသွားနိုင်ကြောင်း အသိပေးရင်းဖြင့်။ အရင်းလေးတော့ မဆုံးစေချင်။
ဤစာမူကို စာရေးသူ ရေးသားခဲ့သော “ယဉ်ကျေးစေရာ ဓမ္မကဗျာ” စာအုပ်ရှိ နိဒါန်းကို အခြေခံ၍ရေးသားခဲ့ ခြင်းဖြစ်၏။
အမေရိကန်နိုင်ငံ နယူယော့ခ်မြို့ရှိ မစိုးရိမ်ကျောင်းတိုက်သို့ ပို့ပေးပြီး၊ မဂ္ဂဇင်းတွင် ဖော်ပြပြီးလည်းဖြစ်၏။
သို့သော် စာဖတ်သူများ မျှဝေခံစားနိုင်ရန် ညီငယ် မောင်ဖိုးသားနှင့် ကိုဝိမုတ္တိတို့မှတဆင့် ပြန်လည် လက်ဆင့်ကမ်း ကုသိုလ် ပွားများလိုက်ပါသည်။
ဘန်ကောက်နွိုင်းရပ်ကွက်၊ ဘန်ကောက်မြို့၊ ထိုင်းနိုင်ငံ၊
Posted by The Bliss Of Emancipation at 11:08 AM0comments Links to this post